Madheshvani : The voice of Madhesh - ईपिजीको प्रतिवेदन मधेशले सिधै अस्वीकार गर्छ : अनिल झा
काठमाडौं, १३ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले मधेशले ईपिजीको प्रतिवेदनलाई सिधै खारेज गर्ने दाबी गरेका छन् । भारतको ७० औं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘ईपिजीमा एकजना पनि बोर्डरमा बस्ने मधेशी समुदायको मान्छे सहभागी थिएनन् ।
बोर्डरमा के समस्या छ ? हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेपछि त्यो कुन प्रकारले अघि बढ्ने हो र कुन प्रकारले बढिरहेको थियो ? र कुन प्रकारले बढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्दा हाम्रो कुनै पनि सहभागिता नभएकोले त्यो प्रतिवेदन हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैनौं ।’
झाले नेपाल सरकारले यदि त्यसलाई यथास्थितिमा अघि बढाए आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘त्यसैले त्यसको रिभ्यु हुनुपर्छ । त्यसमा मधेशी समुदायको स्टेक हुनुपर्छ ।’ उनले नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध सदियौंदेखि अत्यन्तै प्रगाढ रहेको सुनाउँदै आगामी दिनमा पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘नेपाल–भारत सम्बन्ध हामीले बनाएको होईन, यो त युगौं अघिदेखि निर्मित हो । हामीबीचको सम्बन्ध अतुलनीय छ ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएको बताए ।
डा. महतले भारतले नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशलाई अनुकरणीय काम गरेर मार्गदर्शन गरेको पनि बताए ।